Uhlalutyo lwe-Star Wars Drones | Iindaba zeGajethi
Njengomlandeli olungileyo wokuba ndingoka Isaga sa Star Wars, ukuvavanywa kwezi drones bekuyinto ekhethekileyo. Ayisiyilo loyilo lwayo ngononophelo kuphela kodwa ikwachukumisa nezinto zayo, umgangatho wesandi ophuma ngokuqhubekayo kulawulo olukude kunye nezandi ezininzi ezibonakalayo ezivela kwimiboniso bhanyabhanya (ilizwi likaChewaka, ilizwi likaR2D2, ...) kwaye oko Iidrones ngokuthembekileyo zilinganisa imowudi yokubhabha yenqwelomoya yokuqala eyenzayo ngokuzibeka kulawulo lwezi iimfazwe zeenkwenkwezi zeedrones sifumana amaqhuma. Kwiintsuku ezimbalwa sikwazile ukuvavanya ukuqhuba i-TIE Fighter Advanced X1 kunye ne-X-Wing T-65, ezona nqanawa zimbini zidumileyo kuzo zonke iimovie, masibone umbono wethu.
1 Uyilo, eyilelwe ukuthimba abalandeli
2 Isikhululo esinesandi esivela kwiimuvi
3 Yenzelwe idabi
4 Iimpawu zobugcisa kunye nokubhabha
5 Ixabiso le Star Wars drones
Uyilo, eyilelwe ukuthimba abalandeli
Njengoko sele sithethile, uyilo alithandabuzeki amandla amakhulu ale mveliso; into enengqiqo kuba bayazi kakuhle ukuba abathengi ekujoliswe kubo ngabalandeli be-Star Wars kwaye abo abayi kuthenga iidrones ukuba abaqinisekanga ngokubonakalayo ngento esemgangathweni. Izixhobo zenziwe ngeplastikhi kwaye zilinganisa kakuhle isinyithi esenziwe ngeminyaka kwiinqanawa zeemovie. Banokuchukumisa okuhle, bapeyintwe ngesandla kwaye inqanaba leenkcukacha abazibandakanyayo lingaphezulu lee kwento esinokuyilindela kwidrone. Oku kwenza imveliso yokugqibela phantse ibe Ukuhamba ngenqwelomoya ukuze ube nokuzibeka uhombise igumbi lakho xa ungalingi.
Zonke ezinye izixhobo ze-drone nazo ziphumelele kakhulu. Ukuchukumisa kwesilawuli, ubunzima bayo, izibane, isandi sedrones kwaye ngokuqinisekileyo ibhokisi nayo intle kakhulu njengoko kungenakuba njalo. Njengoko sisitsho ziyimveliso ye-10 kwinqanaba loyilo; akukho nto inokuyiphucula ngelo xesha. Kwaye nangona zinokubonakala ngathi zibuthathaka, inyani kukuba bayamelana nomothuko kakuhle ngenxa yomzimba wabo ophantsi.
Iipropeleri zibekwe emazantsi edrone kwaye ngenxa yombala wazo kunye noyilo azibonakali xa zibhabha enceda ukuphucula ubunyani beenqwelomoya ngexesha lokuqhutywa kwayo.
Isikhululo esinesandi esivela kwiimuvi
Iidrones zilawulwa nge isikhululo Isebenza kwi-2,4 GHz kwaye iya kuba mnyama okanye imhlophe ngokuxhomekeke ekubeni yeyobuKumkani okanye iResistance. Ukongeza ekusebenziseni ukulawula i-drone, lo myalelo wongeza inkuthazo ekhethekileyo kulingo oluyi- ukukhutshwa kwamazwi oqobo abalinganiswa kukuncoma xa ubhabha kwaye imixholo eyaziwayo evela kwingoma yesaga. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuhambelana okukhethekileyo okuya kukwenza ukuba ungene ngakumbi kwizihlangu zomqhubi wenqwelomoya embindini wedabi legalactic.
Ngumyalelo onzima kwaye omkhulu. yesiqhelo njengoko ufuna ukuba nezithethi zokuvelisa isandi ngomgangatho olungileyo. Ukongeza kumbala owahlukileyo, umyalelo ngamnye uprintwe ngophawu lwecala elikuyo.
Imowudi yemfazwe yeyona ndlela imnandi yokusebenzisa ezi drones. Ngale nto kuyakufuneka ukhuphele usetyenziso olukuvumela cwangcisa idabi elibandakanya iidrones ezingama-24 kwaye unokubala iimpembelelo ezifunyenwe yidrone nganye kwaye ulayishe amanqaku kuthungelwano lwentlalo. Inqanawa nganye inokuthatha ubuninzi be-3 hits, apho iya kuthi ibhuqwe khona kwaye ivele ngokuzenzekelayo emhlabeni. Ukongeza kwi-app (apho ungabona khona yonke idatha yedabi) umqhubi wenqwelomoya ngamnye uya kuba nakho ukubona kumyalelo wakhe inani leempembelelo athe wazifumana ngee-3 ezibomvu ze-LED.
Ukuze idabi libe mnandi ngenene kufuneka ukuba abaqhubi beenqwelomoya babe nenqanaba elincinci lokulinga, apho banokwenza khona iipirouettes kunye namaqhinga okuba needroni ezininzi xa zibhabha zibabulela kakhulu kwinto yokuba banokufikelela kwi-56 km / h kwimizuzwana engaphantsi kwe-3.
Kwaye kuphakathi edabini apho i «LiFi» ikhanya, entsha iteknoloji engenantambo Idityanisiwe kwezi drones kwaye inyuke ukuya kuma-100 ngokukhawuleza kuneWifi yemveli kwaye yiyo eya kuthi ichonge xa ​​idrone enye ibethe enye kwaye inqaku lobomi kufuneka lithatyathwe.
Iimpawu zobugcisa kunye nokubhabha
Njengokuba besesitshilo, zincinci kwaye zincinci ukukhanya kunye nesantya esiphezulu se-56 km / h. Banolawulo lokuphakama, inkqubo yokuhamba ngokuzenzekelayo kunye nokufika, isantya seenqwelomoya ezahlukeneyo kunye nemowudi yoqeqesho. Njengoko kuqhelekile, ikwavumela iilogo ezingama-360º kwaye icime izibane.
El ukuhamba ngenqwelo moya kulula, nangona kuyinyani ukuba ukukhanya kwayo kunokuba yinto yokudibanisa nobunzima ngakumbi kubaqhubi beenqwelomoya abasakhasayo.
Njengengongoma engathandekiyo, ngenxa yobunzima bayo, ukuzimela kwayo okulinganiselweyo, malunga nemizuzu engama-6-8 ngokuxhomekeke kubukhulu bendiza, ngoko sinokuba mfutshane ukuba silwa nabahlobo abaliqela.
Ixabiso le Star Wars drones
Ixabiso lezi drones lifikeleleka lula kwiimveliso ezinesiqinisekiso sobunyani kunye nenombolo. Unga thenga eJuguetronica nge- € 69,90 nganye kwezi zixhumanisi:
Thenga iTIE Fighter ePhambili X1
Thenga i-X-Wing T-65
Ukuba unqwenela, kukho kwakhona Uhlobo olukhethekileyo lomqokeleli eza nebhokisi enezibane kunye nomculo ovela kwisandi esiya kuthi ngokuqinisekileyo sonwabe iigeek ezivela kwi-Star Wars.
Uyilo nenqanaba leenkcukacha
Isilawuli kunye nomculo onesandi sengoma
Imowudi yedabi emnandi kakhulu
Ubomi bebhetri obubi
Abaqhubi bavela ngokulula
I-Star Wars drones
I-TIE Fighter ePhambili X1 I-X-Wing T-65
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uhlalutyo lwe-Star Wars Drones
I-KELT-9b, iplanethi enobushushu obuphezulu kakhulu kunokuba unokucinga
Ulwakhiwo luqala kwiteleskopu eyi- $ 1.000 yezigidigidi